6 enganonyorwa dzine nhema uye zvinotyisa zvinobata zvakasarudzwa muna Chikunguru Zvazvino Zvinyorwa
6 enganonyorwa dzine nhema uye zvinotyisa zvinobata zvakasarudzwa muna Chikunguru
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Mabhuku, Novela, Nhema nhema, Zvinotyisa
July zvakare. Zhizha iro isu ratiri kumberi pamwe rakawedzera grey kana dema uye, mune chero mamiriro, akasiyana. Izvo zvisingachinje kuverenga, iwo mabhuku anotiperekedza chero mwaka wegore kana iwo ruvara. Nhasi ndinounza idzi 6 yakasarudzika mamanoveli erima toni uye nemazita echinyakare saArthur Conan doyle yakasanganiswa nevanhu venguva imwechete saJussi Adler-Olsen, mune yake yekupedzisira nyaya yeDhipatimendi Q iyo yakagadzwa muBarcelona. Isu tinotarisa.
1 Cage reGoridhe - Camilla Läckberg
2 Ropa Rinotonga -Stephen King
3 Kuurayiwa kwaConcarneau - Jean-Luc Bannalec
4 Mwanasikana wenguva - Josephine Tey
5 Imwe canon yaSherlock Holmes - A. Conan Doyle nevamwe
6 Anotambudzwa 2117 - Jussi Adler-Olsen
Keji yendarama - Camilla Läckberg
Kutevera mukumuka kwenguva idzi ne vanhukadzi vanonyanya kutaurwa, munyori weSweden anomisa paka hit yake Mhosva dzeFjällbacka nemusoro uyu. Kushushikana kwepfungwa ine protagonist inorondedzerwa seinonakidza uye isinganzwisisike.
Nerima rakapfuura, Faye akawana zvese zvaagara achida: murume anokwezva, mwanasikana uye, pamusoro pezvose, chinzvimbo chakanaka munharaunda uye hupenyu huzere neumbozha. Asi nekukurumidza hupenyu hwakakwana hunochinja Zvakakwana uye Faye anova mukadzi mutsva anoda kutsiva uye kutsiva uye azere zviwanikwa.
Ropa rinotonga -Stephen King
Chii chirimo pasina mashoma anotyisa nyaya? Nekuti tenzi wekutya anoungana pano mana enganonyorwa pfupi. Seti yekubata paranormal noir nyeredzi mutikitivha Holly Gibney, mumwe wevanonyanya kudikanwa vatambi naMambo vateveri.
En Ropa rinotonga Holly Gibney achatarisana nekuurayiwa kweAlbert Macready High School, yake yekutanga solo kesi. Vamwe vatatu vari Nhare yaVaHarrigan, nezvehukama pakati pevanhu vaviri vezera rakasiyana uye hunotsungirira nenzira inokanganisa zvikuru; Hupenyu hwaChuck, nechiratidzo chekuvapo kweumwe neumwe wedu. Y Gonzo, uko munyori akapererwa nezano anotarisana nerutivi rwakasviba rwekushuva.
Kuurayiwa kwaConcarneau - Jean-Luc Bannalec
Rangarira izvozvo Jean-Luc Bannalec ndiro zita rekunyepedzera remuparidzi weGerman uye muturikiri Jörg Bong. Uye iyo quirky, yakasviba uye gourmet Commissioner Dupin ndicho chisikwa chake chinonyanya kuzivikanwa. Izvi ndezvake case nhamba sere kwaunofanirwa kuongorora kufa kwechiremba mutaundi reConcarneau.
Mwanasikana wenguva - Josephine Tey
Kumunyori weScotland Josephine Tey, ane mabasa ndeake anonzi anonzi Goridhe Age Yezvakavanzika Novels, ane zvichienzaniswa nemazita ematsotsi enhema akafanana naDorothy L. Sayers kana Agatha Christie.
Iri zita rakaburitswa muna 1951 nyeredzi uyeScotland Yard Inspector Alan Grant. Kukunda muchipatara, Grant anowana nzira yekuuraya kusurukirwa kwake kana mumwe munhu akamubvunza kuti afunge nezvenyaya inonakidza. fembera hunhu hwemumwe munhu kubva pameso avo. Uye Grant achasarudza mufananidzo we Mambo Richard III, pamwe ane hutsinye kwazvo munhoroondo yeUnited Kingdom, uyo, sekureva kwake, angadai asina mhosva pamhosva dzake dzese.
Imwe canon yaSherlock Holmes - A. Conan Doyle nevamwe
Vamwe vezviuru zvevateveri vemutikitivha wekusingaperi weBaker Street vangasaziva chokwadi ichi. Uye ndiye Arthur here Conan Doyle akanyora dzimwe nyaya dzeHolmes dzisina kuiswa mukanoni ko ivo. Zvakare zvinosanganisirwa zvimwe nyaya dzeapokirifa Vakadzi veHolmesi avo vari ivo pachavo chikamu checanon canon.
Pano tinowanawo mutikitivha ane mukurumbira achikwiza mapendekete nevamwe vanhu vengano vakaita saRaffles, Aleister Crowley, Ishe Greystoke (zvirinani kuzivikanwa saTarzan), Iyo Shadow kana Arsene Lupine.
Akakuvara 2117 - Jussi Adler-Olsen
Uye pakupedzisira isu tine iyo nyaya nyowani kubva kuDhipatimendi Q, kubva pane akateedzana anosara International phenomenon neDanish Danish Jussi Adler-Olsen. Inowanikwa kubva Chikunguru 8, iri zvakare zita rechisere Inotarisisa inenge ingori inowanzo gunun'una muongorori Carl Morck uye wake ane moyo munyoro uye akawedzera kunzwisisa mubatsiri Assad. Nemusoro wenyaya wakanangana nemusoro wenyaya, bhuku iri rakawanisawo munyori munyori iye denmark vaverengi mubairo. Uye akateedzana akaburitswa munyika dzinopfuura makumi mana nemaviri uye ane vaverengi vanopfuura mamirioni gumi nemashanu.
Ino nguva tinoenda kubva kuCyprus kuenda kuCopenhagen tichidarika neBarcelona. Uye ndizvo zviri pamhenderekedzo ye Cyprus nunura iyo chitunha chemukadzi kubva kuMiddle East, uchiri mu Barcelona, mutori wenhau Joan Aiguader Anofunga kuti anoona rake rakakura mukana webasa apo, mune chirevo pamusoro pehuwandu hwehuwandu hwevapoteri vakanyura mugungwa, Kupro mukadzi akabatwa 2117.
Zvichakadaro, mu Copenhague, zvinoitika zvinoverengeka zvinoitikawo. Yekutanga, kuti mudiki Alexander akasarudza tsiva nekuda kwekufa kwakawanda zvisina kururama mugungwa. Uye kutamba mune yake videojuego inosarudzwa kusvika 2117 level, anotanga kuuraya zvisina tsarukano. Uye mu Dhipatimendi Q es Assad uyo, aona mufananidzo wemukadzi uya akafa, kufenda nekuti aimuziva kwazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » 6 enganonyorwa dzine nhema uye zvinotyisa zvinobata zvakasarudzwa muna Chikunguru
Chii chinonzi haikus?
Vanasikana vemusha wemachira